Ciidamada Jubbaland oo howl galo ka wada Kismaayo, kadib bam lagu tuuray Xarunta… – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Jubbaland oo howl galo ka wada Kismaayo, kadib bam lagu tuuray Xarunta…
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in ciidamada nabadsugida Jubbaland howl gallo ballaaran oo dad badan lagu qab qabtay ka wadaan xaafada Guulwade, halkaasoo xarun ay leeyihiin Ciidamada Nabadsugida lagu tuuray bam gacmeed.
Bam gacmeedka ayaa waxaa ku dhaawacmay illaa shan askari oo ka tirsanaa Nabadsugida Jubbaland, iyadoo weerarka bambaano kaddib ciidamada ay bilaabeen howl gallo ay dad badan ku qab qabteen.
Ku dhowaad illaa boqol ruux ayaa illaa iyo hada lagu qabtay howl galkan oo saameeyay isu socodka xaafadaha magaalada Kismaayo.
Saraakiisha Maamulka Jubbaland ayaa sheegay inuu socdo howl gal lagu raadinayo kooxo bam gacmeed ku weeraray xarunta Nabadsugida Kismaayo.
Ma jirto illaa iyo hada cid sheegatay, waxaana uu noqonayaa weerarkii u horeeyay ee muddooyinkan ka dhaca gudaha magaalada Kismaayo oo uu amnigeeda ahaa mid aad u wanaagsan.
DEG DEG: Caasimada maamul goboleedka Hiiraan iyo Sh/dhexe oo laga dhigay Jowhar
Sheekh Axmed Shaakir oo Sheegay in Alshabaab Ey Kashaqeeyaan Xarumuha Muhiimka ah ee Dawlada